Ny fanontanianao: Mandra-pahoviana ianao no mahandro atody mihoatra ny antonony? - Mahandro aho
Ny fanontanianao: Mandra-pahoviana ianao no mahandro atody mihoatra ny antonony?
Ahoana no fahandroanao amin'ny atody antonony?
Tokony hahandro atody amin'ny hafanana antonony ve aho?
Mandra-pahoviana no tokony handrahoana atody mora ianao?
Afaka mahazo salmonella amin'ny atody antonony ve ianao?
Inona no maha samy hafa ny atody mora sy mora atody antonony?
Mihodina atody antonony ve ianao?
Inona no fitsipika manan-danja indrindra amin'ny fandrahoan-tsakafo atody?
Mahandro atody amin'ny hafanana be ve ianao?
Ahoana no fomba fahandro atody nefa tsy flip?
Mila mamily atody ve ianao?
Inona no dikan'ny hoe mahazo atody 2 amin'ny atody 1 ianao?
Azo atahorana ve ny atody mitatafika?
Salama atody endasina?
Ampiasao ny spatula manify tena manify, alefaso moramora ao ambanin'ilay atody izy ary mamadibadika. Tsy mila avelanao hatreo ambanin'ny lalana rehetra akory izy io, fa alao antoka fa eo ambanin'ny volombava izy alohan'ny hikororohana. Avelao handro mandritra ny iray minitra eo ho eo ho an'ny mora loatra, 2 minitra mandritra ny antonony sy ny sisa. Atsimbadika indray mandeha ary manompoa eo noho eo.
Ao anaty nonstick kely amin'ny hafanana antonony, menaka menaka (na menaka hafanana). Vaky ny atody. Mahandro 3 minitra, na mandra-pahatongan'ny fotsy. Atsofohy ary mahandroa 2 ka hatramin'ny 3 minitra bebe kokoa, mandra-pahatongan'ny yolk apetraka.
Afana amin'ny lapoaly afovoany ny lapoaly, fa aza adala loatra amin'ny lelafo rehefa tonga ny fotoana mahandro ny atody. "Ny atody voadoboka dia tokony masaka miadana, amin'ny hafanana somary ambany", hoy i Perry. “Maharitra iray minitra ny fifanolanana tsara!” Mandehana mafana kokoa, dia ho atody maina be loatra ianao.
Manaova sira miaraka amina sira halaly 1 pince sy dipoavatra mainty 1 ary andrahoina, mbola hafanana ambony ambany, mandritra ny 1 ka hatramin'ny 11/2 minitra. Mihomehy indray ary mandiniha ny fotsy hoditra amin'ny fahamendrehana; rehefa tafapetraka tanteraka izy ireo fa tsy sarotra, tonga ny fotoana hitodihany.
MAHALALA IZAO: What can you grill on cedar planks?
Raha atody miaraka amina atody maro hafa io atody io, tsy masaka tanteraka, na tazomina amin'ny hafanana mafana mamela ny mikraoba Salmonella hitombo dia mety hahatonga olona maro harary. Ny bakteria iray, Salmonella Enteritidis, dia mety ho ao anaty atody ara-dalàna tanteraka, ary raha mihinana manta na tsy masaka ny atody dia mety hiteraka aretina ilay bakteria.
Mora kokoa: ny atody dia navadika ary nandrahoina segondra vitsy monja lava, ampy hametrahana feno ny fotsy fa avela hilona tanteraka ny volon'atody. … Mihoatra ny antonony: Amin'ity indray mitoraka ity dia mahandro mandritra ny iray na roa minitra ny atody miolakolaka, lava ampy hametrahana ny yolk nefa mbola avelany somary mamy (nefa tsy manify sy mangatsiaka).
Sakan'ny masoandro: atody ny atody miaraka amin'ny yolk ary tsy miolakolaka. … Mihoatra ny salantsalany: Atsimbadika ny atody ary somary maloto ny atody. Mihoatra ny tsara: Atsimbadika ilay atody ary masaka masaka ny atody.
PRINCIPLES COOKING GENERAL COOKING PRINCIPLESENENAL  Ny fitsipika manan-danja indrindra amin'ny fandrahoan-tsakafo dia ny: Ny fitsipika manan-danja indrindra amin'ny fandrahoana atody dia tsotra: Sorohy ny mari-pana ambony sy ny longsimple: Sorohy ny mari-pana ambony sy ny fotoana fahandro lava. aza masaka loatra.
Betsaka ny mety hianjera raha ny amin'ny fanomanana ny atodinao. … Ataovy diso ny fihetsikao, ary afaka mipoitra ny atodinao, tsy misy tsirony, mando, masaka be, rubbery - na izany na tsy izany, indray mandeha.
MAHALALA IZAO: Nanontany ianao hoe: Moa ve ianao mandrotsaka hamburger miaraka amin'ny sarony misokatra na mihidy?
Atody miendrika masoandro
Ity karazana atody nendasina ity dia nahazo ny anarany satria ny mavo mavo mamirapiratra dia mamirapiratra eo amboniny. Mandrahoina vetivety amin'ny afo mandanjalanja mba hametrahana moramora ny fotsy ary mandrakotra ny fotoana rehetra. Ity fomba fandrahoan-tsakafo ity dia mamandrika ny etona, izay mahandro ny tampon'ny atody nefa tsy miolakolaka.
3 Atsimbadika ny atody
Atsofohy moramora ilay atody mba tsy hanapotehany ny masonkarena. Raha mahandro atody mihoatra ny iray ianao dia atodiho tsirairay ny atody tsirairay. … Raha maniry yolk mafy ianao dia mahandro mandritra ny 60-90 segondra. Raha vantany vao masaka ny atody tianao indrindra dia ampiasao ny spatula mba hialana moramora amin'ny kaleta ary afindra mivantana amin'ny lovia.
Raha olona minomino foana ianao, ny mahazo atody misy atody roa sosona dia afaka manondro fa bevohoka kambana ianao na ny vehivavy mpiara-miasa aminao. Na, raha misoratra amin'ny angano Norse ianao dia midika izany fa ho faty ny iray amin'ny fianakavianao. Saingy ny ankamaroany dia midika fotsiny fa hanana omarôma yolkier ianao.
Atody: mety ho tianao izy ireo amin'ny lafiny mena na mora kokoa, fa azo antoka kokoa ny mihinana atody nandrahoina tsara. Androany, atody akorandriaka tsy misy vaky, madio sy vaovao dia mety misy bakteria Salmonella mety hiteraka aretina azo avy amin'ny sakafo. Mba hilamina, ny atody dia tsy maintsy karakaraina tsara, atao anaty vata fampangatsiahana ary mahandro.
Ny atody endasina dia kilasika. Na tianao mora izy ireo (masaka amin'ny andaniny roa), ny masoandro somary miakatra (endasina amin'ny lafiny iray) na voakolokolo (voadio ao anaty lovia), dia mety ho fanampiana ara-pahasalamana ho an'ny sakafonao tsara.
MAHALALA IZAO: Tokony hapetraka amin'ny foil ve ny atonoako?
Fa maninona no mahasalama ny atody amin'ny dibera?
Mila MAILY ve ny arina alohan'ny handrahoana azy?
Azonao atao ve ny mahandro hena manta amin'ny grill George Foreman?